मिथिलाञ्चलमा चौठचन्द्र अर्थात् चौरचन पर्व मनाइँदै | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
मिथिलाञ्चलमा चौठचन्द्र अर्थात् चौरचन पर्व मनाइँदै
भदौ २५, २०७८ शुक्रबार १३:७:५७ | शुभनारायण यादव
सप्तरी – तराईं मधेशका जिल्लाहरुमा आज चौठचन्द्र अर्थात् चौरचन पर्व मनाइँदैछ । उदाउँदो चन्द्रमालाई अर्घ दिएर यो पर्व मनाउन लागिएको हो । विशेष धार्मिक महत्व एवम् अपार श्रद्धाकासाथ यो पर्व मनाउने गरिन्छ ।
विशेषगरी मधेशका जिल्लाहरुमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरुले गणेश चतुर्थीका दिन याे पर्व मनाउने गर्छन् । साँझ ब्रतालुहरुले आ–आफ्ना घरको आँगन तथा कौशीबाट उदाउँदो चन्द्रमालाई अर्घ दिएर मनाउने गर्छन् । भगवान गणेशको श्रापबाट मुक्त हुन चन्द्रमाको पूजा गर्न थालिएको धार्मिक जनविश्वास रहँदै आएको छ ।
यस विषयमा कथामा उल्लेख भए अनुसार चन्द्रमालाई आफ्नो सौन्दर्यमाथि धेरै घमण्ड थियो । उहाँको घमण्डका कारण भगवान गणेशबाट श्रापित भइ कलंकित भएको विश्वास गरिन्छ । एकपटक गणेशको सुँड भएको रुप देखेर चन्द्रमा हाँसेर अपमानित गरेपछि उहाँले तिमीलाई जसले हेर्छ त्यसलाई कलङ्क लाग्नेछ भनि श्राप दिएकाे कथामा उल्लेख छ ।
चन्द्रमाको अवस्था देखेर ब्रम्हाले श्रापबाट मुक्ति पाउन पूजाको विधि बताउँछन् । त्यही अनुसार चन्द्रमाले गजानन् गणेशको पूजा गरेपछि गणेश प्रसन्न भएर श्रापमुक्त गरिदिनुभएकाे जनश्रुती रहँदै आएकाे छ । भदौ महिनाको शुक्ल चतुर्थीका दिन चन्द्रमालाई हेरेमा हेर्ने मान्छेलाई कलंक नलाग्ने र पापबाट मुक्ति पाउँने कुरा कथामा उल्लेख छ ।
यतिमात्र होइन भदौ चतुर्थीको चन्द्रमा दर्शन गरेपछि मनोवाञ्छित फल समेत प्राप्ति हुने विश्वास गरिन्छ। यसै कारण मधेशका जिल्लाहरुमा यो पर्व विशेष महत्व एवम् निष्ठापूर्वक मनाँदै आएको छ ।
यो पर्वमा ब्रतालु महिला दिनभरि निराहार रहेर पुरी, खीर, तथा विभिन्न प्रकारका पकवानहरु बनाउने गर्छन् । विभिन्न प्रकारका मीठाइहरुका साथै दहीको विशेष अनिवार्यता रहेको छ । यस पर्वमा कुमालले बनाएको माटाको भाँडाको अनिवार्यता रहेको छ । कुमालद्वारा निर्मित माटाको भाँडोमा दही जमाएर चढाउने यस पर्वको विशिष्टता रहेको छ ।
चौठीचान बाबाको प्रतिकको रुपमा चन्द्रमालाई अर्घ दिनका लागि ब्रतालु महिलाले पुरी तथा खीर बनाउनका लागि प्रयोग गरिने चामल निक्कै सावधानीपूर्वक राखिने गरिन्छ । कुटानी पिसानी समेत पवित्रताकासाथ गरिन्छ । चौरचनका लागि जाँतोमा पिसेकाे चामलबाट पुरी बनाइन्छ ।​ चौरचनमा चढाइने प्रसादलाई पशुपन्क्षीले छोएमा वा जुठो गरिदिएमा अशुभ मानिन्छ । साथै चौरचनका लागि प्रयोग हुने प्रसादलगायतका सामग्रीहरु बच्चाहरुले नछाेउन् भनेर निकै सावधानी अपनाइन्छ । पूजा सामग्री बच्चा वा पशुपञ्छीले जुठो गरिदिएमा चर्मरोग हुने विश्वास रहेकाे छ ।
यस पर्वको अर्को विशेषता भनेकाे, याे पर्व पशुका लागि समेत मनाइन्छ । परिवारका सम्पूर्ण सदस्य तथा पशुहरुको नामबाट समेत कौरना, छाँछ, मटकुडा, कौरनी आदिमा दही जमाएर चढाउने मान्यता रहँदै आएको छ । पशुको नामबाट चौठीचान्दको नाममा पूजा गरेपछि रोग–व्याधिबाट मुक्ति पाउनुकासाथै समृद्धि प्राप्ति हुने जनविश्वास छ ।
साँझको समयमा आँगनमा माटो र गोबरले लिपपोत गरिन्छ । हँसिया आकारको चन्द्रमा पश्चिम–दक्षिणतर्फ आकाशमा देखिएपछि अर्घ दिइन्छ । कुनै वर्ष कालो बादल लागेर वा पानी परेर चन्द्रमा आकाशमा नदेखेपछि केहीबेर हात जोडेर दर्शन दिन बिन्ती गरिन्छ । यस विषयमा मैथिलीमा यस्तो गीत समेत चर्चित छ ‘आब हौ चोैठीचान, लपक हौ पुडी‘।’
चराहरूको सुन्दर घर जगदीशपुर ताल (फोटो फिचर)
त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीले कार्यालय समयमा माेबाइ...
विभिन्न देशमा श्रमिकलाई अलपत्र पार्ने क्रम बढेपछि श्रम मन्त्रालयल...
कांग्रेसकाे कार्यसम्पादन समितिमा काे–काे परे ? (सूचीसहित)
२४ घण्टामा ६ हजार ८ सय २७ जनामा काेराेना पुष्टि, १० सङ्क्रमित...
‘सरकारकाे सिफारिस जस्ताकाे तस्तै अनुमाेदन गर्ने हाे भने संसद...
केन्द्रको निर्णयअनुसार लुम्बिनी प्रदेशको गठबन्धन अगाडि बढ्छ : म...
नयाँ बनाएपछि पुरानाे राहदानी प्रयोग नगर्न विभागकाे अनुरोध
चितवनमा गैँडा मरेको घटनामा निर्माण कम्पनीका सञ्चालकलाई पक्राउ...
फेसबुकमा 'फ्रेन्ड रिक्वेस्ट' पठाएर म्यासेन्जरमा कुराकानी गर्न था...
यातायात कार्यालयमा पैसा लिएर आउन नपर्ने बनाउनुपर्छ : मन्त्री द...
डोटी अस्पतालका कार्यालय सहयोगी मृत फेला
पूर्वकप्तान हरि खड्काविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
तपाईंको जिल्ला र पालिकाको जनसंख्या कति ?
गोरखाको मनकामना केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प
शुक्रवारदेखि मौसम सुधार हुँदै जाने सम्भावना
'चुनावको मिति घोषणा गर्नेे अधिकार आयोगलाई दिनुपर्छ'
'आन्तरिक हवाई उडानमा मास्क लगाए पुग्छ'